Fepetran’ny lehiben’ny fitsarana :: Voasambotra tany ivelan’ny fonja ilay depiote efa nigadra • AoRaha
Telo andro taorian’ny nivoahany ny fonja, tany Morondava, no nilatsahan’ny baiko hisam­borana an’i Ludovic Raveloson na i Leva, depiote voafidy fanindroany tany Mahabo. Efa voaheloka higadra dimy taona an-tranomaizina sazy mihatra izy, volana vitsy, lasa izay noho ny raharaha fitrandrahana ala. Nahazo fahazoan-dalana hanao asa ivelan’ ny fonja ity olom-boafidy ity, tamin’ny 30 novambra lasa teo saingy izao nosamborina tany Mahabo, afak’omaly izao indray.
Voaheloky ny Fitsarana ao Morondava noho ny raharaha fitrandrahana ala io depiote io, volana vitsy lasa izay. Naiditra am-ponja vonjimaika izy. Nitohy ny fitazonana azy am-ponja rehefa voaheloka higadra dimy taona sazy mihatra ny lehilahy. Nialoha izay anefa dia isan’ireo efa nametraka ny filatsahan-kofidiany ho solombavambahoaka ao Mahabo izy.
“Nangataka ny hampiasa io depiote voaheloka io ny Tranoben’ny varotra, any Morondava. Nahazo fankatoavana avy amin’ny lehiben’ny Tonia mpampanoa lalàna ao amin’ny Fitsarana ambaratonga ambony Toliara izany fangatahana izany ka afaka nivoaka izy, tamin’ny 30 novambra lasa teo”, hoy ny angom-baovao avy amin’ny Zandarimaria, any Morondava.
Nilatsaka tao amin’ny Tonia mpampanoa lalàna ao amin’ny Fitsarana Morondava ny baiko, afak’omaly, avy amin’ ny lehiben’ny Fitsarana. “Tsy maintsy samborina io depiote io ka haverina any am-ponja. Nangataka fanampiana tany amin’ny Zandarimaria ireo mpiandry fonja ao Morondava amin’ny fanatanterahana izany. Niaraka tamin’izy ireo nikaroka azy ny zandary vitsi­vitsy notarihin’ny lehiben’ny Vondron-tobim-paritra Moron­dava. Nokarohina tao an-toerana izy naharitra ora maro saingy tsy hita. Tany Mahabo izy vao tratra, afak’omaly alina. Naterina avy hatrany ao amin’ny fonjan’i Morondava rehefa voasambotra », hoy hatrany ny loharanom-baovao avy amin’ny Zandarimaria.
Fakana an-keriny Lehilahy votsotra tany am-pelatanan’ny jiolahy
Famonoana ankizivavy Mitohy ny fikarohana ny lehilahy iray any Mahajanga
Fahafatesana ankalamanjana Vehivavy hita faty teo amin’ny tohatohabato
Varotra olona :: Avotra ny vehivavy iray saika hamidy 70 tapitrisa ariary
Loza an-dranomamy :: Lehilahy roa mpianaka niara-natelin’ny farihin’i Mantasoa
Fikambanan-jiolahy Ben’ny tanàna naiditra am-ponja